Ukuthengiswa kweeMacs kwiQ1 2021 kuphindwe kabini xa kuthelekiswa ne2020 | Ndisuka mac
Akukho sidingo sokwenza oko Ming-Chi Kuo Ukuqinisekisa ukuba ukuthengiswa kweMac kuyanda. Kwaye ngaphezulu kunokuba baya kuba xa iMac entsha eneprosesa ye-M1 iqhume kwintengiso. Ngaphandle kwamathandabuzo, iApple ibethelele ixesha elitsha iApple Silicon, ukubheja okuyingozi okunempumelelo entle.
Idatha yentengiso yeeMac kwikota yokuqala yalo nyaka sele ivele, kwaye Songa kwiiyunithi ezithengiswe ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Umoya olungileyo uvuthuza kwii-Macs, kwakumalunga nexesha.
Ngokwedatha yentengiso epapashwe ngu IDC, IiMac zibonile ukukhula okumangalisayo kwikota yokuqala yalo nyaka, ngentengiso ikhula nge 111,5% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Iziphumo ezilungileyo enkosi kuApple Silicon
Ngaphandle kwamathandabuzo, iApple ngumenzi okhule kakhulu kwezentengiso zekhompyuter.
Idatha ibonisa ukuba yonke ishishini lekhompyuter lilonke likhule ukusuka kulo nyaka uphelileyo, ngaphandle kwesifo kunye nokunqongophala kwecandelo. Kwikota yokuqala yonyaka, iApple ithengise malunga 6,7 izigidi yeeMac, ezimele iipesenti ezisi-8 zentengiso yonke. Kunyaka nje odlulileyo, kwangelo xesha linye, amanani abo ayeziikhompyuter ezizizigidi ezi-3,2.
Abanye abavelisi abanjengoLenovo, HP kunye noDell babone ukukhula kwamanani aphindwe kabini kule kota. Nangona kunjalo, iApple ikhule kakhulu. URyan reith, Usekela-Mongameli weHlabathi leSixhobo seTown Tracker e-IDC, uthi eli shishini lichatshazelwe kukunqongophala kwamacandelo, kodwa umbono uhlala ulungile.
Ukusebenza kuka-Apple kule kota kulandela ukukhula okukhulu okuqale kwikota yesine yonyaka ophelileyo. U-Apple wabona ukwanda kwe-31,3% kwintengiso ngokuthelekiswa nekota enye kulo nyaka uphelileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, isiphoso sayo yonke le nto kukwamkelwa okukhulu kweemodeli ezintsha ze I-Apple Silicon ngabasebenzisi.
Ngo-Novemba u-Apple wakhupha ii-Macs ezintathu ezintsha kunye ne-M1 processor yabo. Ukujonga phambili kwezi nyanga zimbalwa zizayo, u-Apple kulindeleke ukuba andise ubunkokheli bakhe kwishishini le-PC enkosi ngokuqaliswa kokutsha these Pro e iiMacs bonke sele benenkqubo entsha ye-ARM.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuthengiswa kweeMac kwi-Q1 2021 kuphindwe kabini xa kuthelekiswa ne-2020